Renegades kuyinto esikhangayo ngokubukeka Slots UK Bonus slot ezikhishwe NextGen Gaming. Likhuluma indaba 5 izinhlamvu insikazi nangenkathi ezahlukene kanye imihlaba, ngubani Okwaphawuleka ngamakhono ayo emangalisayo nokufeza. Lokhu Slots UK Bonus slot ine Gameplay bezijabulisa okuyinto uthembisa brilliant indaba ephathwayo futhi abanye animations ekhumbulekayo. Lokhu Ibhonasi Slots UK iyadlaleka kuwo wonke amadivayisi nge kwamanani amancane kanye namakhulu kubhejwa esiphezulu £ 0.30 futhi £ 60.00 ngokulandelana.
Woza Hola onqobayo mnandi kule Ibhonasi Slots UK!!
I slot izici 5 itolitji, 3 imigqa 243 kungenzeka Yokuwina izindlela okusho ukuthi kwi izokwakhiwa nje oluhambisana noma izimpawu ezifanayo esikhathini itolitji eduze eqalile ohlangothini lwesobunxele. Futhi, ezihleleke zezintaba ezinde uphelelise le itolitji phezu kwayo izimpawu singenzeka noma nendawo noma thwi enwetshiwe. Empeleni, bangakwazi avele ngisho njengoba big 3 × 3 imifanekiso ukuze anikele more ngokuwina ezingaba.
I slot zihlanganisa 5 izimpawu ephakeme ukubaluleka okuyizinto 5 ladies from across the time such as Raffaela Blaze, Dragonslayer ekhethiwe, Harries Hellstorm, Ivy Sabreclaw futhi Freya (Valkyrie ka eValhalla). futhi, amagugu aphansi amelwa 5 anemibala amagugu.
Isithonjana zasendle yaziwa njengenye wegolide 'Wild' eyokuma zonke ezinye izimpawu esebumba inhlanganisela ngokuwina ngaphandle i ezineqhwa nombala oluhlaza njengesibhakabhaka ibhonasi isithonjana. Futhi, jackpot ka 250x esigxotsheni womdlali angayizuza ngokudlala lokhu Ibhonasi Slots UK smartly.
Nomvuzo Ibhonasi Izici
Lapho yimuphi spin, the itolitji ababili noma abathathu eduze izokhiya bese spin ndawonye sikhangise izimpawu mega. Abadlali bazothola Izimpawu Mega okuyizinto izimpawu ezintathu eziphakeme futhi itolitji ezintathu ngaphesheya! Ngakho, lokhu uyomane abenzele onqobayo sithuthukiswe.
Lokhu bazobuyekezelwa senziwa ukubeka endaweni ethile ezintathu noma ngaphezulu blue ibhonasi izimpawu ku itolitji. Manje, eziyisishiyagalombili osebenzisa free uyonikwa abadlali ekuqaleni. Kulezi osebenzisa, kuphela 1 we Renegade izintokazi eyokwenzeka itolitji kanye nazo zonke izimpawu ngisho kuhlanganise wilds kanye imifanekiso ibhonasi. Futhi, osebenzisa ezengeziwe esiyoqalwa yenyuswa ibhonasi imifanekiso emithathu ngalesi round. Ngakho, abadlali izothola kuze kube eyishumi nesithupha osebenzisa free kule ingqikithi.
Renegades kuyinto slot ezikhangayo ukuthi udlalwa ngu izihlwele emhlabeni wonke. Iqukethe phezulu ihluzo ikhwalithi yomsindo okuqinile. Iphinde inikeza izici ibhonasi umxhwele ukuthi uvumele ezimbalwa kwi omkhulu. Ngakho, kuba okusezingeni eliphezulu simo esishubile slot nge RTP ka 96.37%.